Hantidhowrka qaranka oo amar dul dhigay hay’adaha dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
Hantidhowrka qaranka oo amar dul dhigay hay’adaha dowladda
Waxaa waraaqda lagu caddeeyay in heshiisyada ay Hay’adaha Dowladdu galeen ee la xariira dhulalka iyo guryahha Dowladda, ee aan laga soo diiwaan galin xaafiiska Hantidhowrka, ay yihiin heshiisyo sharci darro ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka (XHGQ), ayaa hay’adaha kala duwan ee dowladda ku wargaliyay in ay muddo bil gudaheed ah xaafiiska Hantidhowrka, ka diiwaan geliyaan dhammaan heshiisyada la xiriira maamulka hantida ummadda, gaar ahaan dhulalka iyo guryaha.
Sida lagu sheegay qodobka 2aad ee waraaqda ka soo baxday Hanti-dhorka, arrinkaan ayaa lagu saxayaa nidaamka Dowliga ah si loo ilaalinayo hantida ummadda Soomaaliyeed.
“Muwaadiniinta Soomaaliyeed, ee heshiisyada dhulalka iyo guryaha la xiriira la galay hay'adaha Dowladda ay hay'adaha ka dalbadaan in ay la wadaagaan/siiyaan nuqullada heshiisyada ka diiwaan gashan Xafiiska Hantidhawrka Guud si hawsha dhex martay muwaadinka qofka iyo hay'adda ay u noqoto mid xalaal ah oo walaqsan sharciga”. ayaa lagu yiri, warka ka soo baxay hanti-dhowrka.
Xafiiska Hantidharwka, wuxuu hay'adaha Dowladda ugu baaqay in ay u hoggaansamaan dhammaan shuruueda dalka, sidoo kalana ay heshiisyada ku soo diiwaan geliyaan muddada sare ku cayiman.
Maalmahan waxaa socoto dabagal xoog leh uu wado xafiiska Hantidhowrka Guud ee Qaranka kadib markii ay soo baxeen in boob xoog leh uu ku socdo Hantida Qaranka ee ma guurtada ah.